News - Habka loo sameeyo Hook iyo suun
Mashiinka tuubada la daboolay
Waxyaabaha birta ah
Bacda caaga ah
Samaynta habka of Hook iyo suun
Hal-abuurnimadu waxay la xiriirtaa xargo-iyo-loop oo isku xiraya ugu yaraan laba qaybood, sida suunka xubinta hore.
Gundhig: Jillaab-iyo-suun waa nooc ka mid ah suunka, suunka, iyo qaybo kale oo loogu talagalay in lagu sii daayo adeegsiga barnaamijyo badan oo kala duwan.
Kala-baxa ayaa markii hore loo adeegsadaa xargaha, xarkaha ama waxyaabo kale oo u dhigma oo leh heerar kala-dheereyn oo kala duwan, sida ganaaxyada carruurta iyo boorsooyin kala duwan.
Ujeeddada hal-abuurnimada hadda jirta ayaa ah in la soo bandhigo hagaajin-iyo-qabsi hagaajin ah oo lagu hagaajin karo laguna kala bixin karo gacanta. Ujeeddada kale ee hal-abuurnimada hadda jirta ayaa ah in la soo jeediyo jillaab kaas oo habka qufulku uusan u saameyneynin gebi ahaan, ama si uun u yaraanaya, xoog ka yimid xarig go'an ama u dhigma.
Faa'iidada kale ee jillaabku marka loo eego ikhtiraaca hadda jira ayaa ah in qaybta jillaab la muujiyo, markii la hagaajiyo, inay ahaato mid udub dhexaad u ah dabeecadda iyo inay muujiso in jillaabtu si cad u xiran tahay.
Qufulku sidoo kale waa mid la isku halleyn karo si aan loo furin furitaanka mooyee faragelin ula kac ah, iyo markii xoogga saameynaya dhejinta qalabka go'an uu u dhaqmo jihada qufulka, isku dhejinta ayaa loo qaabeeyey inay keento in fawdada lagu dabaqo iyadoo la adeegsanayo a dhajiye, xoogga ku yaal faleebada wuxuu leeyahay qeyb, sidaas darteedna xooggu wuxuu saameyn isku dhafan ku leeyahay xajinta.
Shaqada qufulka ee labada qaybood ee kala go'ay laakiin si isdaba-joog ah isugu xiran ayaa la xakameynayaa ka dib marka qeybaha la keeno booska qufulka, taas oo lagu ogaanayo astaamaha wanaagsan ee jillaabku sida ku cad hindisaha. Intaas waxaa sii dheer, shaqada qufulka waxaa lagu diyaariyey qeybta sameysma shaatiga.
Qabatooyinka iyo guntimaha sida hal-abuurka loo adeegsado waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin badan oo kala duwan, sida suumanka suumanka iyo dhabarka shiraacyada, boorsooyinka iyo wixii la mid ah, si loogu dhejiyo gawaarida, alaabada carruurtu ku ciyaaraan iyo gawaarida carruurta lagu laaban karo, iyo sidoo kale dharka iyo isboortiga, gudbinta suunka iyo suunka qalabka firaaqada.
Sidaa darteed qayb kasta ama laba qaybood oo ka mid ah isku-xidhka ayaa laga yaabaa inay noqdaan qayb muhiim ah oo qayb ka mid ah oo loo adeegsado. Qalabka sida ku xusan ikhtiraaca iyo hirgelinta aaladda waxay leeyihiin astaamo lagu muujiyey codsigan shatiga.
Waqtiga boostada: Abriil-09-2021
Lag Bolts, Qaab dhismeedka, Gawaarida Gawaarida, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Hex handarraabbadeedii,